Mpitati-baovao any Hong Kong nitantara ny famoretana ny fahalalahan’ny asa fanoratana an-gazety araka ny lalàna mifehy ny fiarovam-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Hotohizany am-pitandroana ny marina ny asany maha-mpanoratra an-gazety azy
Voadika ny 23 Novambra 2020 5:12 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Português, Français, Deutsch, English, Español, polski, English
Leung Ka Lai. Sary avy amin'ny Stand News. Nahazoana alàlana.
Ity no ampahany farany amin'ny tantara, navoaka tamin'ny teny Shinoa tao amin'ny The Stand News. Nadikan'ny Global Voices ho amin'ny teny Anglisy ary havoaka eto ao anaty fizarana miisa dimy miaraka amin'ny fahazoan-dalana. Vakio ny fizarana voalohany, faharoa, fahatelo, and fahefatra.
Atao fahirano ao an-tanàndehiben'i Hong Kong ny fahalalahana miteny taorian'ny fampiharana ny lalànan'ny fiarovam-pirenena.
Betsaka ny mpanao gazety avy any ivelany no voalaza fa tsy nahavita nanavao ny visa niasan'izy ireo, notafihana ny gazety mpomba ny demaokrasia Apple Daily ary nosamborina ny mpanorina azy Jimmy Lai, voarohirohy ho mpiray tsikombakomba amin'ny hery vahiny.
Nahitana ny fisamborana an'i Choy Yuk-ling ny tranga farany, mpitati-baovao niasa tao amin'ny haino amanjerim-panjakana ao an-tanàndehibe, Radio Television Hong Kong. Tamin'ny 2 Novambra, nosamborin'ny polisy i Choy hanaovana famotopotorana ilay tranga fanafihana nataon'andian'olona tao Yuen Long [mg]. Tamin'ny 21 Jolay 2019 no nitrangan'izany, raha nanafika ireo mpanao fihetsiketsehana handeha hody tany an-tranony tao amin'ny garan'ny metro Yuen Long ny andian'olona mpanohana an'i Beijing. Nanambara ny polisy fa nanitsakitsaka ny làlanan'ny Fifamoivoizana ilay mpitati-baovao satria nanao fanambarana diso nandritra ny fikarohana nataony momba ny antsipirian”ny fiara iray voarohirohy tamin'ilay fanafihana.
Milaza ny zava-drehetra hatreto fa nanjary asa mampidi-doza ny sehatra asa fanoratana an-gazety.
Nanambara ny fikasan-dry zareo hampihatra ilay lalàna henjana ho an'ny fiarovam-pirenena any Hong Kong i Beijing tamin'ny volana Mey 2019. Koa satria tsy dia voafaritra mazava ny teny hoe “fiarovam-pirenena”, dia azo adika ho mandrisika fankahalana amin'ny manampahefana ny fanakianana. Fampanginana ny tanàndehibe izany.
Mpanoratra an-gazety malaza maro, anisan'izany ny manam-pahaizana ara-toekarena Simon Lee sy Michael Suen ao amin'ny Apple Daily News no namarana ny fanoratany lahatsoratra an-gazety, pejy Facebook marobe nahasarika olona no nofafan'ny mpitantana azy ireo – anisan'izany ny iray notantanan'ny Sekreteran'ny Asam-panjakana teo aloha Joseph Wong – nanjavona ireo tranonkala maromaro, ary maro ireo mpiseran'ny tambajotra sosialy no namafa ny kaontiny.
Vao mainka miha mampidi-doza hatrany ny fitenenana amin'ny fanononana anarana.
Nitafatafa tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana i Leung Ka Lai, mpanoratra an-gazety miasa ho an'ny Apple Daily, ary nanoratra tantara manasongadina ny fihetsiketsehana manohitra ny lalànan'ny fampodiana any Shina.
Tamin'ny 10 Aogositra, nanohina azy ny andro nisamborana an'i Jimmy Lai sy nanafihan'ny polisy miisa 200 teo ho eo ny biraon'ny Apple Daily. Na izany aza, efa fantany mialoha izany satria nesoriny tao amin'ny biraony avokoa ny antsipiriany sy ny mombamomba ireo olona nataony fanadihadiana ary nofafany avokoa ny resaka nifanaovany tao anaty finday tamin'ny volana Jolay.
Nofafany ihany koa ny pejiny Facebook ho an'ny daholobe izay nosokafana tamin'ny 31 Aogositra 2019, taorian'ny hetsika lehibe nanohitra ny lalànan'ny fampodiana nanerana an'i Shina. Nampiasainy ity pejy ity hizarana horonantsary izay nalainy sy ny sasany tamin'ireo tatitra an-gazety nataony. Nahasarika mpijery miisa 2 tapitrisa ny iray tamin'ireo lahatsariny mampiseho ny polisy nidaroka tanora mpanao fihetsiketsehana tao am-piangonana tao Sai Wan Ho tamin'ny 11 Novambra 2019. Nahazo torohevitra marobe ihany koa izy momba ity pejy ity. Mandritra izany fotoana izany, voasoketa sy norahonana tamin'ny aterineto izy.
Ny fisorohana ny famoahana ny mombamomba ny loharanom-baovaony no tena mampanahy azy:
Tsy manahy ny amin'ny tenako aho. Ny fiarovana ireo olona nidinidinika tamiko no zava-dehibe kokoa noho ny ahy ary tsy te-hampidi-doza amin'ny fampahafantarana ireo antsipiriany momba azy ireo aho.
Niaina tao anaty tahotra izy sao ho voasambotra noho ny maha mpanoratra an-gazety azy. Tamin'ity taona ity, raha nitatitra ny tsingerintaonan'ny fihetsiketsehana tamin'ny 12 Jona izy dia tratra tao anaty velam-pandriky ny polisy. Nalain'ny polisy ny kitapo nobabeny sy ny findainy raha teo am-pitantarana mivantana izy. Nosavaina izy ary notazonina nandritra ny 45 minitra.
Nanana fahazarana mamoaka ny anaran'ny mpanao gazety isaka ny tatitra ataony ny Apple Daily. Naato nanomboka ny 1 Jolay ny fahazarana toy izany rehefa nampiharina ny NSL. Ny fampiharan'i Beijing ny lalàna araka izay mety aminy no mampiahiahy indrindra momba ny lalànan'ny fiarovam-pirenena, araka ny nasongadin'ny mpanolotsaina mpahay lalàna ao amin'ny gazety.
Efa 15 taona teo ho eo i Leung no mpanoratra an-gazety. Mino izy fa ny hampihorohoro no tanjon'ny polisy tamin'ny fanafihana.
Tamin'ny 27 Aogositra, tokony ho tapa-bolana taorian'ny nanafihana ny haino aman-jeri-panjakana Shinoa, nilaza ny People's Daily fa “fikambanana politika” mampidi-doza ny Apple Daily. Mety hiteraka fanakatonana ny media mpamoaka vaovao araka ilay lalàna henjana ny fananana endrika politika toy izany.
Niitatra tamin'ireo mpanohana azy ny famoretana natao tamin'ny Apple Daily. Nandritra ny fanafihana, naneho ny fanohanany ilay gazety ny mpisera tamin'ny alàlan'ny fividianana ny entan'ny orinasa reniny Next Media Group, izay nahatonga ny fiakaran'ny vidin'ny petrabolany. Roa herinandro taty aoriana, ny 10 Septambra, nosamborin'ny polisy ny mpividy titra miisa 15 araka ny fiampangana azy ireo ho “niray tsikombakomba tamin'ny fanaovana hosoka” sy ny “famotsiam-bola.” Teo aloha, hanaovan'ny Foiben'ny Fifanakalozana Ara-bola ao Hong Kong sy ny Securities and Futures Commission fanadihadiana ny fanaovana asa tsy mahazatra amin'ny tsenam-bola.
Miahiahy i Leung sao ho raràn'i Beijing ireo media mpamoaka vaovao tsy mahatoky azy ireo:
Mihena ny sehatra ho gazety tsy miankina… Matahotra aho fa tsy ho ela dia terena hiala amin'ity sehatra ity isika, na hakatony ny Apple Daily. Raha te hijanona ho mpanoratra an-gazety ianao dia mila miasa amin'ireo media mpamoaka vaovao mpanohana toa ny Wen Wei Po na Ta Kung Pao.
Mampatahotra izay tsy izy ny zavamisy. Saingy hanohy hijanona ao amin'ny sehatra aho mandra-paha-tsy misy ny toerana malalaka intsony. Vonona ny hiasa amin'ny maha-mpanoratra gazety miahy tena ahy aho. Tsy ny fahaveloman'ny Apple Daily ihany no atrehantsika izao fa ny sehatra fampitam-baovao miahy tena iray manontolo.
Te hanohy ny asany maha-mpanoratra an-gazety azy izy ary hitandro ny marina:
Tsy maintsy sorohintsika ny zavatra mety hitranga afaka 30 taona izay hitenenan'ny olona fa tsy nitranga ny 4 Jona. Tsy maintsy manohy ny asantsika isika mandra-paha-tsy misy ny toerana malalaka intsony.